Jenkins CI သည်လုပ်ငန်းအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် Linux မှ
Linuxero ပါ | | GNU / Linux များ
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်နေသော၊ sysadmins အဖြစ်ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့သြစရာရှိသည် script များ ဆာဗာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်မူအရန်ကူးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများသည်များသောအားဖြင့်အသုံးဝင်ပြီးသင့်တော်ပါသည်။
Jenkins I.C. များအတွက် tool အဖြစ်တင်ဆက်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါင်းစည်းမှု (CIအဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ထပ်တလဲလဲအဆင့်အလိုအလျောက်ရန်ဖြစ်ပါသည် စုဆောင်းခြင်း နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ software ကို၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပေးပို့သေချာစေရန်ယူနစ်စမ်းသပ်ခြင်း။ ၏အဓိကဖြန့်ဝေများအတွက် packages များနှင့်အတူ Linux ကို နှင့် BSD ။
သို့သော်၎င်းတွင် Sysadmins နှင့်အသုံးပြုသူများစိတ် ၀ င်စားနိုင်သောရွေးချယ်စရာများစွာပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာ Shell Commands ကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ Terminal တွင်လုပ်သကဲ့သို့ scripts များကိုဆင်တူခြင်း။
၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရည်အသွေးတစ်ခုမှာ web graphical interface မှတဆင့်အလွယ်တကူ configure လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ crontab နှင့်ဆင်တူသော်လည်းချက်ချင်းအမြင်အာရုံတုန့်ပြန်မှုရှိသည်။
Jenkins CI အတွက် Task ကို Configuration
၎င်း၏အဓိက panel က၎င်းတို့အားအောင်မြင်စွာလည်ပတ်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စီစဉ်ထားသည့်အလုပ်အားလုံး၏အခြေအနေကိုအလွန်ပြတ်သားသောဖျော်ဖြေမှုဖြင့်ဖော်ပြပေးသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် Jenkins လုပ်ငန်းများ
ထို့အပြင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည့်တစ်ခုချင်းစီ၏လုပ်ဆောင်မှုရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုများအကြားမှီခိုမှုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနောက်တစ်ခုမှာ၎င်းတွင်ရှိသည် ဝဘ် backend၎င်းတို့အကြားလုပ်ငန်းများကိုဖြန့်ဝေရန်သို့မဟုတ် Master-Slave ဗိသုကာများအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ဆာဗာများစွာကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့မှသာမာစတာဆာဗာတစ်ခုသည်ကျွန်တစ်ယောက်အနေနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောဆာဗာများပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအစပျိုးစေသည်။ Master ဆာဗာတွင်အမှားအယွင်းများရှိပါကကျွန်သည်၎င်း၏အခန်းကဏ္overကိုလွှဲပြောင်းယူပြီးကျန်ဆာဗာများရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစီစဉ်နိုင်သည်။
Jenkins I.C. ၎င်းကို Java တွင်တီထွင်ထားပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်ခွင့်ပြုရန်ဤဘာသာစကား၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းရည်ကိုရယူသည် ပလပ်အင်စာရင်းအင်းများနှင့်ကွပ်မျက်မှုအစီရင်ခံစာများမှအစုအဖွဲ့များနှင့်ဖြန့်ဝေထားသောစနစ်များကိုစီမံသည်။
ကြိုးစားရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် Jenkins I.C. နှင့်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအများဆုံးမှတိုးမြှင့်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Jenkins CI, လုပ်ငန်းအလိုအလျောက်များအတွက် tool တစ်ခု
အလိုအလျောက်အတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤကိရိယာကိုမသိပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင် Java ကိုတီထွင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အထိအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
ဂျာဗား? ငါမသုံးရန်သို့မဟုတ်အကြံပြုဖို့မငါ့အဘို့လောက်ပေ၏။ ငါ Java မှာလုပ်ထားတဲ့စနစ်များနှင့်အတူပြီးသားခေါင်းကိုက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
Oracle ရဲ့ Java လား OpenJDK လား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် OpenJDK သည်များစွာသော JAVA developer များအတွက်အဓိကခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါနှစ်ခုလုံးကိုကြိုးစားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရင် OpenJDK ကငါ့ကိုဒုက္ခပိုပေးတယ်၊
ဂျာဗားသည်စက်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားသည့်နေ့၊ အနည်းဆုံးရှင်းလင်းစွာအနက်ဖွင့်သည်၊ သို့မဟုတ် CLR (အမှတ်အသားမရှိ bytecode, VM သို့မဟုတ်ထူးဆန်းသောအရာများ) ကဲ့သို့သောအရာပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
ဂျာဗားသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မကောင်းသောဘာသာစကားမဟုတ်ပါ (ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၎င်းသည်ဘာသာစကားတစ်ခုကဲ့သို့အလွန်ကောင်းပုံရသည်) သို့သော်၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပြီးဆိုးရွားလှသည်။
ငါထည်ကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ ငါလုပ်ချင်တာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ script ဖန်တီးဖို့လည်း Python ပါ
Task အလိုအလျောက်စနစ်သည် sysadmin အတွက်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ Jenkins နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းကို Ant သို့မဟုတ် Phing (PHP of Ant) ကဲ့သို့သောကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသော application များဖြန့်ကျက်ခြင်း။ ထည့်သွင်းနိုင်သည့် QA plugins အမြောက်အမြားအပြင်။
ကံမကောင်းစွာပဲအင်တာနက်ပေါ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများအလွန်နည်းပါးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ web interface သည်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောအသုံးပြုသူများအတွက်ပင်သတိမရှိသောအရာများဖြစ်သည်။
Jenkins ကို CyanogenMod developer repositories ကအသုံးပြုသည်။ Samsung Galaxy Mini ကဲ့သို့ဆဲလ်ဖုန်းမော်ဒယ်များအတွက်တရားဝင် Cyanogen အထောက်အပံ့ကိုအာမခံချက်မရှိသော ROM များကိုပြုစုသည်။
အဲဒါကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆာဗာတွေအတွက်တော့အဲဒါ desktop အတွက်ပဲလို့ငါထင်တယ်။ ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရမည်သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်အသုံးပြုသူအဆင့်တွင်မရှိပါ
ကုဒ်အချက်များ။ Gnome မှာအက္ခရာထည့်သွင်းနည်း